Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. कोरोनाबारे थाहा दिने डाक्टरको मृत्यु – Emountain TV
कोरोनाबारे थाहा दिने डाक्टरको मृत्यु
एजेन्सी, २५ माघ । नोवल कोरोना भाइरसबारे सबैभन्दा पहिला जानकारी दिने चिकित्सक ली वेनलियाङको मृत्युलाई लिएर चीनमा व्यापक जनआक्रोश बढेको छ। भाइरस उद्गमस्थल मानिएको हुबेई प्रान्तको वुहानस्थित एक अस्पतालमा उपचारका क्रममा नेत्ररोग विशेषज्ञसेत रहेका उनको मृत्यु भएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्ने क्रममा उनी त्यही भाइरसबाट संक्रमित बन्न पुगेका थिए।
नयाँ भाइरस देखिएको उल्लेख गर्दै गत डिसेम्बर ३० मा चिकित्सकहरूको एउटा च्याट ग्रुपमा उनले उक्त भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने सुरक्षा उपाय अपनाउन सुझाएका थिए । उनले सोही च्याट ग्रुपमा नयाँ भाइरस सन् २००३ मा भयावह स्थिति पैदा गरेको सार्सजस्तै देखिने बताउँदै त्यसबाट सातजना संक्रमित भएको पत्ता लगाएका थिए। तर गलत तथ्य सार्वजनिक गरी अनावश्यक हल्ला मच्चाएको भन्दै चिनियाँ प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धानसमेत गरेको थियो ।
च्याट ग्रुपमा भाइरसबारे सन्देश प्रवाह गरेको चार दिनपछि नै प्रहरीले उनलाई सामाजिक व्यवस्था बिगारेको भन्ने व्यहोराको अभियोगपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको थियो। तर पछि तथ्य सही साबित भएपछि स्थानीय अधिकारीहरूले डा. वेनलियाङसँग माफी मागेका थिए। उनले चिनियाँ बेबसाइट वाइबोमा जनवरी १० मा आफूमा खोकी देखिएको, अर्काे दिन ज्वरो आएको र दुई दिनपछि अस्पतालमा भर्ना भएको पोस्ट गरेका थिए। जनवरी ३० मा उनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो।